लकडाउनमा के खुल्यो, के खुलेन ? (सूचीसहित) – Janata Times
लकडाउनमा के खुल्यो, के खुलेन ? (सूचीसहित)
काठमाडौं, जेठ २९ । सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका अर्थ र सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले गरेको लकडाउन खुकुलो पार्ने २१ दिने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
जसअनुसार शुक्रबारदेखि उपत्यकाभित्र र अन्यत्र जिल्लाभित्र निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीअनुसार चलाउन पाइने भएको छ । सार्वजनिक यातायातका साधन, अन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवा भने बन्द नै रहने छन । यसैगरी पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खोल्न पाइनेछ । तर सपिङ मलहरू भने खोल्न नपाइने ब्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी रेस्टुरेन्टहरू प्याकिङ र टेक अवे सेवा दिने गरी खुला गर्न सकिनेछ भने क्वारेन्टिन बनाइएका बाहेकका होटलहरू बन्द नै रहनेछन् ।
यी हुन सञ्चालन गर्न नपाइने क्षेत्र
१. शैक्षिक संस्थाहरु (यसभित्र विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर र तालिम केन्द्रहरू)
Related tags : के खुलेन ? (सूचीसहित)लकडाउनमा के खुल्यो
दैनिक १० हजार पिसिआर परीक्षण गर्ने गरी नयाँ मेसिन खरिद गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सहि मागका लागि कोरोना संक्रमण फैलाउने घातक आन्दोलन !
फोटो फिचरमूख्य समाचारवागमतीसमाचारसमाज
कोरोनाबिरुद्धको लकडाउनमा प्रहरीको उच्च सतर्कता : सडकको चेकजाँचमै भेटिए उपत्यका कमाण्डर
भारतद्वारा नयाँ नक्सामा काली नदीको ऐतिहासिकता स्वीकार, नेपालले भेट्टायो दरिलो प्रमाण
शिक्षा / स्वास्थ्यसमाचार
बोलिभियाका राष्ट्रपति, स्वास्थ्य मन्त्रीसहित ७ मन्त्रीलाई कोरोना पुष्टि